Nhau - Basa resilinda musoro gasket uye zvinhu
Musoro gasket chinhu chakakosha mukati meinjini inotsva. Musoro gasket unovimbisa kumanikidza kunogadzirwa kubva pakupfuta kweparaki kwemafuta emafuta kunoramba kuri mukati memukati memoto. Iyo yekutsva kamuri ine ma pistoni uye inoda huwandu hwakawanda hwekumanikidza kuti ive nechokwadi chekuti mapistoni anoramba achipisa nemoto nenzira kwayo. Pamusoro pezvo, mafuta uye chinotonhorera zvine mabasa akakosha zvakaenzana asi, kuti vaite mabasa avo nemazvo, havagone kusanganisa. Iyo musoro gasket inochengetedza makamuri akapatsanurwa kuve nechokwadi kuti hapana kuyambuka-kusvibiswa kwemvura.
Iko kushanda kweinjini humburumbira gasket ndiko: chisimbiso, chinova chinhu chakasungirirwa chekuisa mucherechedzo chakaiswa pakati pesirinda neburi remusoro. Sezvo zvisingaite kunyatso gadzika pakati peye cylinder block uye iyo cylinder musoro, cylinder musoro gasket inodiwa kudzivirira yakanyanya-kumanikidza gasi, kuzodza mafuta uye kutonhora mvura kuti isatize pakati pavo.
Cylinder musoro gasket zvigadzirwa zvinowanzo kuve zvakakamurwa kuita maviri marudzi:
(1) Iyo simbi asbestosi mat inoshandisa asbestosi sematrice uye yakaputirwa nemhangura kana simbi ganda. Vamwe vanoshandisa rakarukwa simbi waya kana yakakungurutswa simbi simbi semafupa, uye vamwe vanowedzera mhete dzesimbi dzakatenderedza gomba re humburumbira kuwedzera simba. Chakanakira ndechekuti mutengo wakaderera, asi simba rakaderera. Nekuti asbestos ine carcinogenic mhedzisiro mumuviri wemunhu, yamiswa munyika dzakasimukira.
(2) Iyo gasket yesimbi inogadzirwa nechimwe chete chidimbu cheplate yesimbi yakatsetseka, uye kune matanda akasununguka pachisimbiso, chinovharwa nekusimba kwemakomba nebasa rekupisa-kusavhara sealant. Yakave ichishandiswa zvakanyanya kunze kwenyika. Izvo zvakanakira simba rakakwira, yakanaka yekuisa chisimbiso, asi yakakwira mutengo.
Kutsiva musoro gasket hachisi chinhu chaunogona kuita mugaraji. Usanyengerwe nekureruka kwemusoro gasket sezvaunoda kuti ubatanidze mativi ese einjini kuti usvike pairi. Zviri nani kusiira basa iri kune nyanzvi. Izvo zvaunosara ibasa rekutora zviito chimwe chinhu chisati chaitika chikaitika. Mune mamwe mazwi, kudzivirira inoputika musoro gasket uye yakakwira musoro gasket yekugadzirisa mutengo inogona kuitwa neyakajairwa sevhisi yekutonhora system. Tichifunga nezve yakaderera mutengo weanotonhora masisitimu zvikamu, zvine hungwaru kuzvitsiva pachinzvimbo apo pazvinenge zvichidikanwa ipapo kubhadhara zviuru zvemadhora kune makuru ekugadzirisa.